Dhaimondi-Cheka Bhokisi Gloves Pendant (14K) - Popular Jewelry
Daimondi-Cheka Bhokisi Gloves Pendant (14K)
Kugadziridza kuongorora ...
14 Karat Yero Yegoridhe14 Karat maviri-Toni Goridhe Inokosha Metal:
14 Karat Yellow Goridhe - $ 365.0014 Karat Ndarama-dzeToni Tatu - $ 365.00 Zvakasiyana:
Simbi Inokosha: 14 Karat Yero & maviri-Toni Goridhe
Mabwe ematombo: Hapana
Kureba: 41.3 mm * (1.6 inch)
Upamhi: 28.3 mm *
Approx. Kurema: ~ 4.3 gramu *
* Zvese zviyero nezviyero zvakaenzana.
** Mutsipa unotengeswa zvakasiyana.
Ndokumbirawo utibvunze kana uine mimwe mibvunzo pamusoro pemamwe saizi kana masitayiti, kuwanikwa, kududzirwa, uye sarudzo yemunhu.
Tichifunga kuti zvese zvakashongedzwa zvishongo Izvi ndizvo zvakanyanya kuitika kune iyo yakaonda, zvidimbu zvakarembera zvishongo zvakajeka, izvo zvinowanzove zvakakurumidza kukurumidza kukunda kune avo vanorema vavaenzani. Zvishongo zvakanaka zvinofanirwa kubviswa kubva mumuviri zvisati zvave kuita zvemuviri zvine simba (sekunge basa rekuvaka kana zvemitambo yekubatidzana) sezvavanogona kukanda pane zvimwe zvinhu zvobva zvabvaruka. Zvinyorwa zvakanaka zvishongo zvinofanirawo kubviswa zvisati zvagezwa semakemikari akaomeswa mukati me shampoos uye masutu anogona kukanganisa kana kutokuvadza zvishongo.
Zvinokurudzirwa kwazvo kuti sirivha zvishongo, kana zvisiri mukushandiswa, zvichengeterwe mukati mekabhegi remhepo kana mumidziyo. Izvi zvinodzivirira sirivha kubva pamakemikari kuita nezvinhu zvakatipoteredza (senge mweya-wakawanda mweya; acidic ganda) izvo zvingaite kuti sirivha ishatise uye nekurasikirwa kwayo yakasikwa, yakasaririra-chena luster.
Kutemesa zvimedu zvesirivheri zvakatorasika zvinogona kudzorerwa kumamiriro adzo nekukasira kuburikidza nemishonga yekuchenesa macomputer, senge iyo yatinopa. Kukurumidza kukurumidza makumi maviri nemaviri ekugezesa mune inogeza kunobvisa matura emarara uye emarara kubva sirivheri.
Imwe nzira yemumba-mhinduro dzekubvisa nyadzi dzinogadzirisika zvakare dziripo, kunyange zvisiri nyore. Zvidimbu zvidimbu zvesilva zvisina kusimba zvinogona kuiswa mumvura mhinduro yekapu yekubheka uye aluminium foil uye kuunzwa kumota; zvishongo zvinofanirwa kuvandudza ruvara mukati memaminitsi mashoma.
Zvishongo zvegoridhe zvinogona kupfekedzwa uchitsvaira chero bedzi usiri kushandisa chero makemikari ane hutsinye mukugeza kwako. Regedza kushandisa zvishongo zvegoridhe mudziva nekuti chlorine inogona kukuvadza alloy goridhe.
Uye Gamuchira Exclusive Notices & Offers
Copyright © 1988 Popular Jewelry / Yakagadzirwa na William Wong Uye Kuchengetedzwa naKevin Wu